I-Bentley Geopak, umbono wokuqala-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Bentley Geopak, ingqiqo yokuqala
I-Bentley Geopak, ingqiqo yokuqala
Efanayo (hayi kangako) kule nto inikwa yi-AutoDesk Civil 3D, iGeopak luluhlu lwezicelo ezivela kwi-Bentley yoBunjineli boLuntu owenza umsebenzi wokuhlola, iimodeli zendlela yedijithali, uyilo lwendlela kunye ne-geotechnics. Nangona le yokugqibela sele siyazi ukuba iya kubanjiswa emva kokufunyanwa kwe-GINT Software.
Nje ukuba ifakwe, i-icon ethile ayenzelwanga iGeopak, xa iqhuba iMicrostation isebenza ngokuzenzekelayo. Ukuba ayenzeki, yenziwe kwi Izicelo> iBentley Civil> Sebenzisa iBentley Civil
Oku kuquka iGeopak.
Kwinqanaba le-generic, njenge-Bentley Civil iquka imisebenzi emininzi, amandla oMbane ahlukeneyo kunye nezixhobo ezimbalwa kunye nezilungelelaniso kwimimandla yaseSpeyin efana Amandla oLuntu eSpain.
Izinto zokusebenza zeBentley Civil zi:
Nangona kunjalo sancocho izixhobo ziphuculwe kunye umsebenzi wokuhamba apho zidweliswe kwinqanaba lomsebenzi ngale ndlela elandelayo:
Izicwangciso zangaphambili kunye nobungakanani
Le ndlela yindlela engcono yokusebenza, kuba nangona ezinye ziphindaphindiwe, kulula ukuyisebenzisa ngenxa yokuba ziqokelelwe ngokusetyenzisweni oluqhelekileyo njenge:
Uphando: Kubandakanya imisebenzi yokungenisa idatha ukusuka kubuchwephesha bendawo / izixhobo zegps, uyihlele, wenze izilungiso umahluko, uthumele ngaphandle kwezinye iifom, ubuyisele ebaleni, njl.
Site: Iquka ukusingathwa kwemilinganiselo, ukulungiswa kwamapulatifomu, ukusika, ukucwangciswa kweendlela kunye nemigodi, njl njl.
Izixhobo zeDTM: Oku kuhlala kwinqanaba elenziwe lafana nokwakha iimodeli zedijithali, imigca yendlela, iiprofayili, njl. Nangona izixhobo eziyimfuneko zeSiza kunye noPhando kwabelwana ngazo apho, ezinje ngokudala iimephu zethambeka, imisebenzi yokungenisa okanye ukuthumela ngaphandle, njl.
Ngokwendlela yokusebenza, umhlaba wahluke kakhulu kwi-Civil3D, ebonakala isebenza ngakumbi kum kuba yahlulwe phakathi kwezinto kunye noqwalaselo, ngelixa iGeopak ihlala kwinqanaba lemisebenzi, iiprojekthi kunye neetemplate. NjengeMicrostation ene-AutoCAD, iBentley Civil ithatha iintsuku ezimbalwa ukuseta kwakhona izinto ezinokufa, kodwa ihlala ihambelana, xa kuthelekiswa iBentley Site V8i kunye neSayithiWorks 95.
Ngokuphathelele izixhobo zokusebenza: yam intlonipho. Inkqubo yemigca engama-230,000 ye-IGN undithumele yona umhlobo waseGuatemala Ngenye imini kwi-Civil3D wenza umatshini ukuba uphume emva kwemizuzu emine, elahla isithuko kumyalezo wenkumbulo. KwiGeopack wahlala kangangemizuzu engama-42, eguqula ipleyiti kwaye ebonisa ukuba unezinto ezingakanani, kodwa ekugqibeleni wazifaka njengezikhewu kwi-gsf wayiguqulela kwi-TIN kwimizuzu emi-2. I-CPU inyukele kwi-49% kwaye okwangoku, imemori yePC yayihlala iqhubeka nokwenza ezinye izinto.
Siza kubona indlela yokwenza ezifanayo esikubonayo ngaphambili ne-Civil 3D.